Antony, araka ny fantatra, ny fahataran’ny fahatongavan’ilay lalàna teo anivon’io Andrim-panjakana io, ka tsy nanam-potoana nandinihana azy, ireo depiote. Efa dingana iray lehibe mankany amin’ny fisorohana ny herisetra izao vitan’i Madagasikara izao, hoy ny depiote Masy Goulamaly, filohan`ny vaomiera misahana ny miralenta sy ny fampandrosoana eo anivon`ny Antenimieram-pirenena. Raha ny antontan’isa nivoitra tao anatin’ilay fanadihadiana atao hoe : MICS 2018 mantsy izao, dia vehivavy 1 amin’ny 4 eto amintsika no iharan’ny herisetra nataon’ny olona akaiky azy. Fa tsy ny vehivavy irery akory no arovan’ity lalàna ity, na ny lehilahy ihany no saziany, satria mety mahakasika ny olona rehetra ny herisetra na lahy izy na vavy na tahaka ny ahoana ny fiaviany, ny fari-pahaizany, ny fari-piainany… Misy ihany koa ny karazana herisetra izay tsy eritreretin’ny maro ho herisetra akory. Anisan’izany, ohatra, ilay atao hoe : « outrage sexiste », izay karazana fihetsika na fiteny manambany ny mahalahy na mahavavy ka mandona ny sain’ny olona iharany. Mety handoavana lamandy100 000 Ariary hatramin’ny 500 000 Ariary ny fanaovana an’izany, ao anatin’ity lalàna momba ny herisetra mifototra amin’ny miralenta ity.